कोशी अस्पतालमा कोरोना शंकास्पदको मृत्यु – BFM 91.2
विराटनगर, २३ साउन । कोरोना भाइरसको आशंकामा विराटनगरको कोशी अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका एक मारवाडी समुदायका पुरुषको आज मृत्यु भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका –९ का ५८ वर्षीय जयप्रकाश अग्रवालको बिहान ९ः१५ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. चुमनलाल दासले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मृतकमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको छ ।
कोरोना शंकास्पद पुरुषको शव अहिले अस्पतालकै आइसोलेसनमा राखिएको छ । ‘अग्रवाललाई एक सतादेखि ज्वरो र खोकीको समस्या रहेछ,’ डा. दासले भन्नु भयो , ‘परिवारका सदस्यले भने निमोनिया हो भन्दै बाहिरकै निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेको पाइएको छ ।’
स्वास्थ्य अवस्था झन् जटिल बन्दै गएपछि भने बिहान उपचारका लागि कोशी ल्याइएको र केही बेरमै मृत्यु भएको जानकारी उहाँले दिनु भयो । मृतकमा लामो समयदेखि उच्च रक्तचापको पनि समस्या रहेको पाइएको डा. दासको भनाइ छ ।
मृतकमा कोरोनाको आशंका गरिएका कारण स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएको उहाँको भनाइ छ । रिपोर्ट आइसकेपछि मृतकमा कोरोना भए/नभएको पत्ता लाग्ने डा. दासले बताउनु भयो ।
उहाँले रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा दाहसंस्कारका लागि परिवारका सदस्यको जिम्मा लगाइने र पोजेटिभ आएमा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई बुझाइने जानकारी दिनु भयो ।
← नेपालमा आज ३ सय ६० जना संक्रमित थपिए
डिलरबाटै प्रतिबन्धित औषधिको कारोबार,सञ्चालक पक्राउ →